Inona No Ambaran’ny Biby Famantarana Olaimpika sy Paralaimpika 2020 Japoney Manoloana Ny Fahasembanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Marsa 2018 5:02 GMT
Vakio amin'ny teny Português, srpski, русский, Español, Français, македонски, Italiano, English
Sary famantarana Olaimpika sy Paralaimpika Tokyo 2020 “Sary famantarana Olaimpika” (Ankavia) sy “Sary famantarana Paralaimpika” (Ankavanana). Pikantsary tao amin'ny fantsona Youtube ofisialy Tokyo 2020 .
Tia biby famantarana (mascotte) ny Japoney. Angamba ny Kumamon (くまモン), ilay orsa famantarana ny perfektioran'i Kumamoto, no nalaza indrindra tamin'izany ary vao mainka lasa nalaza kokoa taorian'ny horohorontany nifanesy izay namely ny perfektiora tamin'ny volana Aprily 2016. Sady manan-danja, raha tsy iankinan'ny ain-dehibe, ny biby famantarana toy ireny, mametraka marika iray, ary tena ilaina izy haha-‘Cool Japan’, ilay tetikasa hampiroboroboana ny kolontsaina Japoney amin'ny mpanjifa iraisampirenena. Mazava ho azy fa mety ho tsara tarehy sy mahafinaritra ny biby famantarana. Domo-kun no tena tiako indrindra tamin'izany, ilay biby famantarana an'i NHK fampielezam-peo aman-tsary ho an'ny daholobe ao Japana .
Nanambara ny biby famantarana ho an'ny Lalao Olaimpika sy Paralaimpika Tokyo 2020 i Japana tamin'ny faran'ny volana Febroary 2018. Tsy nomena anarana miavaka ireo biby famantarana ireo fa fantatra fotsiny amin'ny hoe ‘Biby famantarana Olaimpika’ sy ‘Biby famantarana Paralaimpika’ – saingy toa miendrika sarimiaina sy manga maherifo izy ireo ary manana hery hafa kely sy toetra mampiavaka azy.
Meet the Cute Official Mascots of the 2020 Olympic and Paralympic Games in Tokyo! https://t.co/orj9UJwYJy#Tokyo2020#OlympicGames#Paralympics#mascotpic.twitter.com/QgbF1Ixuss
Fantaro ny Biby Famantarana Ofisialy Mahafinaritra ho an'ny Lalao Olaimpika sy Paralaimpika Tokyo 2020.
Toy izao ny fomba famaritana ny biby famantarana Olaimpika amin'ny teny Anglisy ao amin'ny tranokala ofisialin'ny Lalao Olaimpika Tokyo 2020 :
Endrika iray sady mampiseho ny fomba nentim-paharazana fahiny no mampiseho ny zava-baovao ny biby famantarana Olaimpika. Raha sady mankalaza ny fomba nentim-paharazana izy dia manaraka ny toetr'andro hatrany ihany koa miaraka amin'ny vaovao sy ny torohay farany. Manana dikany ara-drariny lehibe sady tena atleta ilay biby famantarana. Manana hery manokana ihany koa izy izay ahafahany miovaova toerana haingana na aiza na aiza. Nalaina avy amin'ny endrika makarakara nentim-paharazana sy vinan'ny hoavy manerantany ilay biby famantarana Olaimpika. “
Tena mahafinaritra ny mandre ilay biby famantarana Olaimpika afa-miovaova toerana “haingana na aiza na aiza”. Tena manana hery manokana izy izay mba iriako ananana manokana, ary maneho ny tsara indrindra ao Japana, firenena iray mankafy ny fahiny saingy manantena ny vaovao ihany koa sy miandrandra ny hoavy, amin'ny fampisehoany ny fomba nentim-paharazana sy ny vaovao ity biby famantarana ity.
Na izany aza, amin'ny maha-olona manam-pahasembanana ahy dia nahaliana ahy kokoa ny momba ilay sary famantarana ho an'ny Paralaimpika Tokyo 2020, izay nofaritana toy izao manaraka izao:
Manana endrika mahafinaritra tahaka ny felam-boninkazo cerisier ilay sary famantarana ho an'ny Paralaimpika ary manana hery siopernatioraly. Matetika manana fihetsika tony izy; na izany aza, tena matanjaka izy rehefa ilaina izany. Manana hery anaty izy ary manana fo tsara fanahy izay mankafy ny natiora. Afaka miteny amin'ny vato sy ny rivotra izy. Afaka mamindra ireo zavatra amin'ny alàlan'ny fijerena izany fotsiny izy. Nalaina avy amin'ny endrika makarakara nentim-paharazana sy ny felam-boninkazo cerisier ny sary famantarana ho an'ny Paralaimpika.
Amin'ny maha-olona kilemaina ahy, tena mankasitraka ny fananana hery siopernatiora aho, ary maniry fatratra ny hanana fahefana amin'ny rivotra—sario an-tsaina ny rivodoza rehetra izay azoko sorohana—ary tena miandry fatratra ny handre ny tantara izay holazain'ny vato amiko aho. Tena soritra mampiavaka manokana ny Japoney ihany koa ny fitiavana ny natiora, izay mbola ho asongadin'ilay biby famantarana ‘felam-boninkazo cerisier’ , satria tsy misy endrika Japoney mihoatra noho ny sakura dia ilay felam-boninkazo cerisier .
Ilay biby famantarana ny Paralaimpika Tokyo 2020. Pikantsary avy amin'ny fantsona Youtube ofisialy Tokyo 2020 .
Tena tiako tokoa noho izany ilay biby famantarana ny Paralaimpika.
Rehefa mamaky amim-pitandremana fatratra ny famariparitana ilay endrika anefa, na izany aza, dia ho hitanao fa tsy toy ilay biby Olaimpika iray hafa namany, ilay biby famantarana Paralaimpika fa tsy nofaritana mazava ho “atleta” izy. Manontany tena aho amin'ny maha-kilemaina ahy hoe nahoana no izany no zava-mitranga, satria toy ny milaza ilay izy fa tsy “atleta” ireo Paralaimpiana. Mety hanamarika ihany koa ny mpamaky mandinika tsara fa raha toa ka natao ho tsy manavaka ny lahy sy ny vavy ilay biby famantarana—mahatonga ny anarany ho tsotra dia tsotra— dia hita fa manga ilay biby famantarana Olaimpika, loko izay matetika omena ny ankizilahy, ary ny an'ilay Paralaimpika kosa dia mavokely, loko omena matetika ny ankizivavy any Japana sy any an-kafa rehetra manerantany. Manana toetra heverina ho endrika “vavivavy” toy ny ”malemy fanahy’ ihany koa ilay biby famantarana Paralaimpika .
Voamarik'i Dennis Frost tsara ireo toetra ireo, mpampianatra mpiara-miasa ao amin'ny Kolejy Kalamazoo any Michigan izay manao fikarohana momba ny Paralaimpika any Japana .
“Eto. . . tahaka ny misy fanondroana ankolaka ny lahy sy ny vavy,” hoy i Frost tamiko nandritra ny resadresaka nifanaovany manokana tao amin'ny Facebook. “Tena nanohina ahy ny fomba namaritana azy ireo. Nodinihiko ihany koa ny famaritana izany tamin'ny fiteny Japoney, mba hahazoako antoka fa tsy olana fandikanteny hafahafa no anton'izany. Vao mainka anefa feno kokoa ny fahasamihafàna hita tamin'ny teny Japoney, ametrahana ny biby famantarana Olaimpika ho nomena toetra matanjaka sy mavitrika, raha toa ka nomena endrika tena mandefitra sy malefaka ilay Paralaimpika.”
Mazava ho azy fa azo atao ny mandalina mamaky tsara ny zavatra toy izany, kanefa tsy misy olona tia ireo olona mpihevitra zavatra miiba. Raha amidy ho fahatsiarovana ireo biby famantarana ireo dia azo antoka fa hividy amin'ilay famantarana ny paralaimpika aho mba ho naman'ilay Domo-kun ahy. Saingy nony farany, naleoko nizara ny tenin ‘i Grace Ohashi, mpilalao Judo teo aloha izay tratran'ny fahadontoan'ny tamba-tsela maro ary mpandray anjara matetika ao amin'ny fandaharan'ny fahitalavitra NHK ho an'ny sembana ‘Barrier Free Variety’.
“Nieritreritra ny fijery ireo olona manana fahasembanana fahiny aho rehefa namaky ny fanazavana tao amin'ny taratasy”, hoy i Ohashi. “Na izany aza, tsy azoko antoka hoe firy ireo olona no namaky ny fanazavana.”